Nahasarika ny faharanitan-tsaina? Misy ny anton'izany - Fifandraisana
Tsy azo lavina izany, rehefa miditra bara ianao ary manadihady ny efitrano hahazoana vady, amin'ny voalohany dia toa manintona anao.
Fa ho an'ny halavirana lava, io no eo anelanelan'ny sofinao, fa tsy eo anelanelan'ny tongotrao, no hamehezana ny fifanarahana.
Mahagaga ve raha toa isika rehetra, amin'ny lafiny sasany, voasariky ny faharanitan-tsaina?
Boky mihoatra ny jerena
Voalohany, andao hanomboka amin'ny Sapiosexuals.
Izany no teny ampiasaina ho an'ireo olona taitra amin'ny faharanitan-tsaina.
Avy amin'ny latinina ilay teny (andao atrehana, ataon'ny rehetra), sapiens, midika hoe ‘hendry’.
Navadiky ny fomba fiasan'ny saina izy ireo, miaraka amin'ny fijery tsara izay faharoa amin'ny fifandraisana ara-tsaina mahery.
Ho an'ny foreplay dia aleon'ny Sapiosexuals manavaka ara-tsaina amin'ireo olon-tiany.
Ny fahaiza-mandanjalanja, ny fahitana maranitra ary ny fanesoana marani-tsaina dia azo inoana fa hamadika azy ireo sy ho any am-pandriana noho ny bisikileta mahafinaritra sy ny tsipika fakana am-bifotsy
Ny fehezan-teny hoe 'Sapiosexual' dia niaina fanavaozana mihitsy aza tato ho ato, miaraka amin'ireo olona mampiasa azy hilazana ny fironany hanao firaisana amin'ny tranonkala mampiaraka.
Misy mihitsy aza ireo fampiharana mampiaraka izay manome fahafaham-po ny fironana ara-tsaina, milalao amin'ny tsy fankasitrahan'izy ireo ny kolontsaina vapid hook up mahazatra izay mihanaka amin'ny fiarahana amin'ny Internet.
Tian'ireto olona ireto ho fantatrao fa ankoatry ny fandehanana lavitra eny amoron-dranomasina, sy ny fitiavana sakafo italianina, 'Hey, eto aho ho an'ny ati-doha, fa tsy ny hatsaran-tarehy.'
Na izany aza, sapiosexualité koa dia niteraka resabe noho ny elitista, ary ny fiezahana hanao ny safidin'ny tena manokana, filan-kevitra maharitra.
Saingy ity no faran'ny farany. Ary ahoana ny amin'ny salantsalany Joe izay tsy manandrana manao fanambarana momba ny toetra mampivadi-jaza amin'ny fiarahana amin'ny Internet?
Ho an'ny olona mahazatra dia mbola mitana ny antony manintona ny saina noho ny antony evolisiona. Marina izany…
Satria nisy mpahay siansa nilaza izany…
Ny siansa dia nanohana ny fisarantsika olona mahira-tsaina.
Raha ny fandehany dia evolisiona.
Araka ny fanadihadiana nataon'ny University of New Mexico , ny lehilahy manana IQ avo kokoa dia mahery setra kokoa ary manana tsirinaina mahasalama kokoa noho ny namany matanjaka kokoa.
Ka tsy kisendrasendra fotsiny izany: ny faharanitan-tsaina + tsirinaina tsara dia famantarana ny fototarazo salama ho an'ireo mpiara-miasa.
Raha ny fivoaran'ny evolisiona dia midika izany fa ny vehivavy misafidy lehilahy manana ambaratonga avo lenta dia manome antoka ny tenany hanana fahafaha-miteraka bebe kokoa amin'ny fiterahana.
Ka eo no anomezanao azy, hoy ny siansa fa misy antony hisehoan'ny olon-kendry manao firaisana.
Miankina amin'ny ati-dohany ny fahaveloman'ny karazan-javamaniry ary eh… ”fo lehibe.”
Fikarohana iray hafa nataon'ny mpivarotra kilalao fanaovana firaisana ara-nofo any UK no nahita an'io mpianatra avy amin'ny anjerimanontolo ambony dia manana filan-dratsin'ny firaisana ara-nofo amboniny .
Mpianatra mahamenatra? Tsy mahagaga izany, fa ny mpanafika dia tsy hoe nampitombo ny libido fotsiny ny fandehanana tany amin'ny oniversite, natokana ho an'ny mpianatra avy amin'ny oniversite malaza (azo inoana fa misy IQ ambony kokoa). Manana drive sex ara-pananahana ambony noho ny namany izy ireo.
Tsy milaza akory ireo mpianatra ireo fa nanao an'io firaisana ara-nofo mahafinaritra io raha oharina amin'ny sisa amintsika.
nahita meme vita amin'ny lanezy aho
Raha ny tena izy dia ny mifanohitra amin'izay no hita: ny olona manana IQ avo lenta dia mirona amin'ny fanaovana firaisana kely kokoa noho ny ankamaroan'ny mponina ary izy ireo manomboka any aoriana amin'ny fiainana , koa.
Angamba mifantoka amin'ny zavatra hafa izy ireo, toy ny fananganana ilay balafomanga manaraka eny amin'ny habakabaka, na mahita fanasitranana amin'ny aretina mahatsiravina sasany.
Mety hisafidy ny handany ny fotoanany any an-kafa fotsiny izy ireo fa tsy eo anelanelan'ny lamba firakotra.
Ireo mpiara-mianatra aminy tsy dia salama saina dia manana mpiara-miasa marobe satria ny fianarana ho an'ny lalao famaranana dia tsy ny laharam-pahamehany voalohany (ok, ankapobeny izany fa azonao ilay hevitra).
Na dia toa mahakivy aza izany, amin'ny farany, mahomby ho azy ireo izany, satria naseho ny faharanitan-tsaina avo lenta mba hanomezana fahafaham-po maharitra kokoa amin'ny fifandraisana.
Ny faharanitan-tsaina dia misafidy ny nerosy ho tonga mpifidy raha ny momba ny mpiara-miasa, mifantina azy ireo amin'ny toetra hafa fa tsy ny fijery fotsiny - ireo toetra izay manana faharetana.
Ahoana ny fananana fifandraisana salama amin'ny teny 8
Famantarana 7 fa tsy mifanaraka ianao sy ny sakaizanao
Ahoana no hiatrehana ny tsy fahasalamana
Ny maraina aorian'ny…
Antony iray hafa manintona antsika hakingan-tsaina dia mitoetra amin'ny nofinofy sy ny zava-misy.
Isika rehetra te ny nofinofy, fa rehefa tapitra ny fiheverana dia manome ny tena fizahana tena izy isika.
Rehefa tonga ny hazavan'ny andro mangatsiaka, ary tsapantsika fa efa natory tamin'ny 10 izahay, saingy nifoha tamin'ny 2, fantatray fa tsy maintsy misy bebe kokoa hitazomana ny afo.
Azo antoka fa tsy mikapoka ny ati-dohanao amin'ny bara ny olona.
Isika rehetra marivo amin'ny ambaratonga sasany - tariby hijery voalohany, ary hametraka fanontaniana avy eo, fa aorian'ny alikaola na filan'ny miala, maniry mafy bebe kokoa isika rehetra: ny iraisan'ny olona, ​​ny vazivazy ary ny resaka.
Ao anatin'io farany io, RESAKA , izay itarihan'ny saina mialoha amin'ny hazakazaka.
Vitsy ny olona mijanona miaraka amin'ny vatomamy vita amin'ny sandry lava, satria amin'ny faran'ny andro dia tsy 'mahafatifaty' ny moana.
Dure dia jaza ary miasa mandritra ny dimy minitra.
Mahafatifaty eo amin'ny efijery amin'ny sarimihetsika trano frat, fa na dia eo amin'ny rom-com romana aza dia mandresy amin'ny farany ny bandy nerdy marani-tsaina (na gal) amin'ny farany.
Fantatr'i Hollywood izay tena misy antsika any - ny mahita ilay olon-kendry mitondra any aminy ny loka.
Toy ny voninkazo ny fijery azy, ary malazo amin'ny farany
Farany nefa tsy farany, zavatra fantatsika rehetra, fa matahotra mangingina: toa manjavona.
Ry tompokolahy, afaka mitovy amin'i Ryan Gosling ianao izao, fa telopolo taona eo ho eo, raha tsy hoe mpanazatra malaza ianao, mety ho toa kitay crisps ireo.
Tsy ho azo ihodivirana ny potikao manaitaitra, ary mety tsy ho eo daholo ny hidinao.
Na izany aza, ny sainao dia mety ho maranitra toy ny tamin'ny telopolo taona hafahafa.
Raha ny marina dia mety ho hareza maranitra toy ny fiainana ny fiainana sy ny fahalalana mitombo no hamolavola anao.
Io fahalalana fanampiny io dia ho tonga mora rahefa antitra ianao, ary haharitra mandrakizay.
Tompokolahy, ny ati-dohanareo no ho endri-javatra tsara indrindra ho anao rehefa mianatsimo ny zava-drehetra.
hafiriana ny lehilahy no afaka mankafy ny zavatra tsy tsapany
Ramatoa, ankizy, hery misintona, ary ketrona, amin'ny farany dia hanova ny vatanao misy akanjo lava 20, fa ny saina, hatsikana ary fahendrena, tratrarinao nandritra ireo taona ireo dia ho eo foana.
Izay no hisambotra ny fo rehefa lany ny fahatanorana, ary ny volo fotsy sy botox lasa de rigueur.
Tsy misy na iza na iza isika afa-maina amin'ny fahasimban'ny fotoana.
Hiafara toy ny prun bitika isika rehetra ao anatin'ny am-polony taona ho avy.
Ka raha tokony ho ora maharary ao amin'ny gym, dia mety handoa vola ny mandany ora mahafinaritra amin'ny oronao ao anaty boky.
Smart dia mahafatifaty, Ryan Gosling voaozona.
maninona ry zalahy no misintona tampoka
inona no dikan'ny hoe raisina ho azy
ohatrinona no mendrika ny mpitsara judy
ny fomba firesaka kely ary ny fihainoana bebe kokoa
ny lehilahy dia miresaka amin'ny lehilahy hafa ny lohahevitra resadresaka ifanakalozan'ny vehivavy amin'ny vehivavy hafa.